I-china Tyvek Paper Bag i-Reversible Zipper yokuVala i-Makeup Bag ye-Natural cosmetic Bag mveliso kunye nabathengisi | Utshintsho
Iphepha leTyvek eliHlambulukileyo eliHlambulukileyo elinokutsha leZiphu yokuVala iNgxowa yeNdalo yeZithambiso
Izinto: UTyvek Ubunzima: 66g
Isicelo: izithambiso, ubizo, indlu yangasese, indlu
Uncedo: Iyahlambeka, inobuhlobo
Into eyaziwa njengeyona ndawo yentengiso njenge "Dupont paper" luhlobo lwezinto ezinoxinano oluphezulu olubizwa ngokuba yiTyvek, ngesiTshayina ebizwa ngokuba yiTwiken.
I-Tyvek yaqanjwa nge-1950s kwaye yaqala imveliso yorhwebo kwii-1960s. ITyvek isebenzisa itekhnoloji ye-flash, nge-polymer emva kokunyibilika okushushu ibe yifilthi eqhubekayo kunye nokushushu okuyi-glue kwi-polyethylene ephezulu, obu buchwephesha bodwa beTyvek budibanisa iipropathi zephepha. , Ifilimu kunye nelaphu, ukungangeni manzi, ukuphefumla, ukukhanya okusemgangathweni, ukuhlala ixesha elide, ukumelana neinyembezi, ukuqina, ukubonakalisa okuphezulu, ukusasazeka, ukumelana ne-UV, ukuthungwa kunye nokuthamba kuyingqayizivele, ukukhuselwa kwendalo kunokuphinda kusetyenziswe kwakhona, kwaye kuyahambelana kakhulu nazo zonke iintlobo zetekhnoloji yokuprinta kunye nedijithali Itekhnoloji yokuprinta, efanelekileyo kwiintlobo ngeentlobo zetekhnoloji yokulungisa.
I-Tyvek isetyenziswa ngokubanzi, izinto ezingena manzi kunye nezinto eziphefumlayo zangaphandle zodonga kunye nophahla, izinto zokupakisha inzalo kwizixhobo zonyango, kunye neempahla zemichiza ezikhuselayo kwicandelo lokhuselo lomntu. , ezinje ngeemveliso zefashoni yasekhaya, ifashoni, ubugcisa, inkcubeko kunye nemveliso yoyilo, ukhuselo lokusingqongileyo kunye nokupakishwa koyilo, njl.
Umbala esingabizi, ethambileyo ukwakha
Umbala weTyvek unokwenziwa ube yiyo nayiphi na into oyithandayo kwaye unokuprintwa ngokulula. Njengoko izinto ezithambileyo kakhulu, kube lula ukuba naziphi na iingxowa imilo.
Izinto ezigudileyo zeTyvek azikuthinteli ukuthungwa kweengxowa.Ngendlela, nokuba iphepha alinamanzi, imingxunya yokuthunga ayinamanzi.
Egqithileyo Iphepha elomeleleyo elinokuhlanjwa ngokutsha eliphuthiweyo lokuNgavalwa kweNgxowa yeZipho
Okulandelayo: I-Eco Strong yoBomi beXesha eliDala elinokuhlanjwa ngoZiphu wePhepha leZimonyo
I-RPET Flower Bag enePrinta yokuPrinta ngokuPheleleyo ...
Ivenkile yokuthengisa izithambiso zokupakisha ...
Waffle ipatheni RPET Bag ixesha elide Makeup Natural ...
DB Material Pocket Sport Style Running Bag wais ...